Ahoana no hanamaivanana ny fanaintainana amin'ny fikarakarana, ahoana no hampihena ny fanaintainana mandritra ny fiaramanidina? Inona no atao hoe, inona ny fanaintainana ao anatin'io fiaramanidina io?
Ahoana no hanamaivanana ny fanaintainana amin'ny fiaramanidina - ny fomba izay mahomby amin'ny 100%
Ny fiterahana dia lava, maharary ary mandeha amin'ny angovo. Rehefa avy niaina indray ny fahatsapana sy ny fanaintainana miaraka amin'ny fahaterahana, ny vehivavy dia mahatsiaro azy mandrakizay. Noho izany, ny fanontaniana dia mitranga amin'ny fomba hanamaivanana ny fanaintainana amin'ny fiaramanidina. Azo atao izany raha manaraka fitsipika maromaro ny vehivavy bevohoka.
Ny fahantrana amin'ny ady - fahatsapana
Ny fijerena ny fahaterahan'ny reny voalohany, ny reny dia matetika liana amin'ny namany izay niteraka zaza, inona ny fanaintainana eo amin'ny asa alohan'ny fahaterahana, haharitra hafiriana sy fomba hiadiana amin'izany. Tsara ny manamarika fa ny voalohany, antsoina hoe fitarihana fiofanana, dia mety miseho na amin'ny herinandro faha-20 amin'ny fitondrana vohoka. Na dia izany aza dia tsy mitarika ho amin'ny fiasan'ny asa izy ireo ary manome ny vehivavy bevohoka kokoa noho ny fahatsapana mampihetsi-po.
Ny fihenan'ny asa voalohany dia matetika mitovitovy amin'ny fanaintainan'ny tebiteby, izay voamarika mandritra ny fadimbolana. Vetivety dia mihamitombo ny fahatsapana rehefa misokatra ny tranon-kibo. Ny mahazatra dia ny hoe tsy manam-pahazotoana mazava ny fanaintainana ary matetika manana toetra manimba. Ny fanombohan'ny asa dia matetika arahin'ny:
ny fialan'ny bosoa;
drafitry ny fluid amniotique.
Inona no mampalahelo amin'ny ady?
Na dia eo am-pikarakarana ny fiterahana aza ny vehivavy bevohoka dia liana amin'ny dokotera mikasika ny zavatra azo ampitaina amin'ny fanaintainana amin'ny ady, toy ny ahoana izany. Tsy manome valiny mazava ny mpitsabo, manondro ny maha-izy azy ny zavamananaina tsirairay. Ny fiantombohan'ny fizotran'ny fiterahana dia miseho amin'ny fomba samihafa: ny vehivavy sasany dia mametraka ny fanaintainana ao amin'ny faritra malemy, ny hafa kosa mijery ny fanaintainana eo amin'ny ambany kibo kokoa amin'ny endriny mitovy amin'ny mitranga mandritra ny fadimbolana.
Tsy mahafantatra amin'ny fampitahorana ny fanaintainana amin'ny ady, ny puerperas dia manoritsoritra azy ireo ho "manosihosy" eo amin'ny sehatry ny fihenana izay miaraka amin'ny fanaintainana. Rehefa nandeha ny fotoana dia nandeha tamin'ny tazomoka ny fahatsapana mampangirifiry, mahazo karazana mampihetsi-po. Ny vehivavy sasany dia mahatsapa ny taolana avy amin'ny valizy ary ny sakrama dia manomboka mihataka. Rehefa mandeha ny fotoana, mitombo ny fihenam-bidy, mitombo ny faharetan'ny fifandonana tsirairay, manjary kely ny isa. Izany dia manondro ny fisehoan'ny zaza tsy ho ela.
Mety hisy fifindrana tsy misy fanaintainana ve?
Rehefa nianatra, inona no fanaintainana amin'ny ady , vehivavy bevohoka no liana amin'ny dokotera mitaiza bevohoka, karazana tsy misy fanaintainana. Amin'ity tranga ity dia sahiran-tsaina kokoa amin'ny sehatra voalohany izy ireo - ny fanokafana ny matavy, miaraka amin'ny fanaintainana mafy. Tsara ny manamarika fa amin'ny fiterahana maoderina dia misy fomba fanenjehana izay mahatonga ny fizotran'ny asa tsy misy fanaintainana ( fanavakavahana ). Na izany aza dia afaka manamaivana ny alahelony ny vehivavy iray, nefa tsy maka fanafody.
Ny vokatry ny fanadihadiana dia nampiseho fa ny fahatsapana mampihetsi-po miaraka amin'ny fahaterahana dia noho ny fizotrany amin'ny 30% monja. Ny sisa 70% dia singa ara-psikolojika sy endriky ny fizotry ny vatan'ny vehivavy. Ny tahotra, ny adin-tsaina, ny tahotra ho an'ny zaza, izay tonga eto amin'izao tontolo izao, dia mampitombo ny fijaliana sy ny fijaliana izay hitan'ny vehivavy mandritra ny fiterahana. Ao amin'ny rà mandriaka, ny tohatran'ny hormonina adrenalinina dia mitombo, ka miteraka ranon-dra sy hozatra ary fanaintainana.
Ahoana no hanamaivana ny fanaintainana mandritra ny asa?
Raha miresaka momba ny fampihenana ny fanaintainana mandritra ny fifindran'ny aretina ny dokotera, dia manondro ny filàna fiomanana amin'ny fiatrehana ny vehivavy bevohoka. Izy io dia atao amin'ny fifehezan'ny vehivavy. Ny reny amin'ny ho avy dia manatrika kilasy manokana, izay ampidirin'izy ireo amin'ny teknika efa misy mba hanamorana ny fizotry ny fiterahana. Ny vehivavy bevohoka dia mianatra fitondran-tena tsara mandritra ny fiterahana, miaina . Voatendry ny vehivavy mba hampiasa fomba fanatanjahan-tena manokana izay mampiofana ny hozatry ny gorodona. Ny dokotera dia manambara amin'ny vehivavy bevohoka amin'ny antsipiriany ny tokony hatao mba hanamorana ny fifandonana. Raha tsy misy ny fanoherana, manendry:
Ahoana ny fifohazana mandritra ny ady herisetra?
Ao anatin'ireo teknika izay mampianatra ny fampihenana ny fanaintainana mandritra ny asa, ny toeram-pitsaboana dia manana toerana manokana. Noho ny fahatsorana sy ny fahazoana fahafahana hampiasa izany amin'ny fahaterahan'ny zazakely, dia afaka mahazo vehivavy bevohoka avokoa. Araka ity fomba fiasa ity, aorian'ny fanombohan'ny asa dia tsy tokony hanandrana hanafoana ny fanaintainana ny mpiara-mianatra: tsy afaka manenjika ianao, indrindra fa mitomany. Ny fanaintainana dia afaka manamafy ihany koa.
Mba hampihenana ny fahatsapana mahatsiravina, aorian'ny fanombohana ny fialan-tsasatra tsy tapaka, dia tokony hanaraka ity fomba manaraka ity:
fanafody - novokarina tamin'ny orona amin'ny kaonty 4;
Manafintohina - amin'ny vava, ho amin'ny kaonty 6.
Ny fitaomam-panahy dia tokony ho fohy kokoa hatrany. Rehefa misintona izy, dia asaina mametaka ny molotra amin'ny rongony. Noho ny fihetsika toy izany, ny vehivavy bevohoka dia hahavita hitsoka ny sokatra araka izay tratra, tony. Ny havokavoka dia feno oksizenina, izay hamakivaky ny rà mankany amin'ny zaza. Noho izany, ny fahafahana mampitombo ny fahasarotana mifandraika amin'ny hanoanana oksizenina amin'ny foetus dia nesorina.
Voalaza fa rehefa mipetraka amin'ny toerana iray ny renim-pianakaviana, dia mihen-danja ny fahatsapana fanaintainana na tsy hita intsony. Ny vehivavy sasany nampiofana dia mampiasa fitaovana yoga manokana hanamora ny fifindrana. Na dia izany aza, ny ankamaroan'ireo reny mitazona dia manolo-tena amin'ny fanampiana ireo toerana azo atrehina amin'ny ady:
Ao amin'ny toerana misy azy:
Mila miankina amin'ny latabatra fisakafoana ianao, ny faran'ny fandriana, ary ny tongotra kely. Tsapao tanteraka ny lamosinao sy ny vavony. Ny lanjan'ny vatana dia alefa amin'ny sandry sy ny tongotra. Eto amin'ity toerana ity ianao dia mihodina miankavia, miankavanana, miverina ary mandroso.
Nidina izy ireo tamin'ny fisondrotan'izy ireo, namelatra ny tongony be dia be, nitongilana tamin'ny tongotra manontolo. Ny aoriana dia miankina amin'ny rindrina.
Ny tongony dia napetraka eo amin'ny sakan'ny soroka, ny tanana dia napetraka eo amin'ny andilany. Fihetseham-poko mihemotra, havia miankavanana.
Ao amin'ny toerana mipetraka eo amin'ny fitball:
Mipetraha eo amin'ilay baolina goavana, ny tongotra dia avoakany amin'ny sisiny, mandohalika eo amin'ny lohalika. Manaova jiggle. Tokony hosoloana ny baolina.
Fanazaran-tena hanamora ny fifindrana
Mety hampihena ny fanaintainana mandritra ny fifindrana amin'ny fanampiana ara-batana manokana. Ny gymnastique manokana ho an'ny vehivavy amin'ny fiterahana dia tokony hofidina eo amin'ny sehatry ny fitondrana vohoka. Ataovy eo anelanelan'ny fialana. Afaka ampidirina ireo fampiharana mahomby:
Ny ranjony dia ny elatra afovoany, ny fitaovam-piadiana. Amin'ny rivotra iainana, manindrona ny rantsana eo amin'ny andaniny ny ankilany, ambany noho ny fanafody izy ireo, mampihetsiketsika ny borosy.
Ny toerana voalohany dia mitovy: mihodina amin'ny elany ny elany, manainga tongotra iray mankany.
Mba hanamaivanana ny fanaintainana eo amin'ny andilana mandritra ny fifindrana dia manoro fanafody ny dokotera. Amin'ny fifehezana ny kibon'ny ambany kokoa amin'ny lalana avy any afovoan-tanàna mankany amin'ny andaniny, ny vehivavy dia afaka manalefaka ny fihinan'ny vozona tsy ao amin'ny vavony, fa koa ny perineum, ny feny. Ny famenoana ny tanany amin'ny totohondry, ny felam-bolo dia mameno ny tendrony ivelany amin'ny feny. Azonao atao ihany koa ny manangona ny faritra misy ny sakramenta: ny tanana dia voafatotra amin'ny totohondry, entina any ambadiky ny aoriana, manosotra ny sacrum amin'ny fihetsika boribory. Ny fahafantarana ny fomba hanamaivanana ny fanaintainana amin'ny fiaramanidina miaraka amin'ny fanampiana amin'ny famonoana dia tsara ny mampifamatotra izany amin'ny fialana vatana.
Ny Bath mba hanamora ny fifanoherana
Mba hampihenana ny fanaintainana mandritra ny asa dia afaka ary amin'ny alalan'ny fanampian'ny fomba fanao amin'ny rano. Raha tsy misy ny fanoherana (fisotroan-dronono vetivety amin'ny fluid amniotic, ny fiakaran'ny tosi-drà), dia mamela ny vehivavy ao anatin'ny fotoana voalohany hiasa amin'ny fidiovana ny mpikaroka. Ny hafanana rano dia tokony ho 40-45 degre. Izany dia hanampy amin'ny fampihenana ny fanaintainana, hanamaivana ny fihenjanana sy ny tazomoka, hihinana. Alohan'ny ahafahanao manamaivana ny fanaintainana amin'ny fiatrehana fahatapahana toy izany, dia mila mahazo antoka ianao fa tsy mahasalama ny foza.
Spiral taorian'ny nahaterahana
Ny fanalan-jaza taorian'ny señana
Pikantsary bala amin'ny fanomezana
Teraka tamin'ny herinandro 33 herinandro
Ahoana ny fahateren'ny faharoa?
Fandevenana postoperative aorian'ny fizarana caesarean
Firy ny fandroahana aorian'ny fiterahana?
Halkidiki - toetrandro
Ahoana ny handrahoan-tsakafo - ny sakafo tsara indrindra isan'andro sy ny tsirony rehetra!
Kely amin'ny tananao
Biby vita amin'ny vatomamy - lasitra
Fomba hisafidianana madio vaksiny - toro-hevitra rehefa mividy
Inona no manakenda ny elatra havia?
Salady avy amin'ny akanjo fotsy
Fiatombohan'ny tsakitsaky ny placenta
Dropsy amin'ny alika
Top 10 mpaminanin'ny androntsika, izay tanteraka ny faminaniany
Film American Children
Zanak'i Ciara, zanaka lahy 2 taona, nanao akanjo avy amin'i Giorgio Armani
Gripa intestinal amin'ny ankizy - soritr'aretina
Diabolobe maitso amin'ny zaza